होइन, के हुँदैछ देशमा ? प्रचण्डलाई पनि पक्राउपुर्जी काटिने ! (पक्राउ पुर्जी काटिने विज्ञप्तिसहित)
ARCHIVE, POLITICS » होइन, के हुँदैछ देशमा ? प्रचण्डलाई पनि पक्राउपुर्जी काटिने ! (पक्राउ पुर्जी काटिने विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौँ- विप्लवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले पक्राउ पुर्जी काटेपछि विप्लवको पार्टीले पनि प्रचण्डका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी काट्ने भएको छ । महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का नाममा ओली सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
प्रकाशित : Thursday, March 01, 2018